Pattaya Tourism vatungamiriri: COVID-19 majekiseni akakwenenzverwa
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Thailand Kuputsa Nhau » Pattaya Tourism vatungamiriri: COVID-19 majekiseni akakwenenzverwa
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Health News • Hospitality Industry • Investments • nhau • Kuvakazve • chengetedzo • Thailand Kuputsa Nhau • ushanyi • Tourism Kutaura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Akasiyana Nhau
Dai 22, 2021
Sekureva kwevakuru vezvekushanya muPattaya, Thailand, vanotya kuti majekiseni eCOVID-19 akaderera uye anonoka.
Kuve wekutanga kuremekedza, vatariri vekushanya kuPattaya vakatenda meya nekutanga kwemaitiro ekudzivirira.
NaThailand ichitarisira kuvhurazve vashanyi vekunze muna Gumiguru, zvisinei, vakuru vakuru vanofunga kuti vari kumashure zvakanyanya nekushomeka kushoma.
Vanhu chete vakakwanisa kutanga kwekutanga zviuru makumi maviri nemaviri neChina neChishanu vaive vashandi vekurapa, vanozvipira, uye vakwegura.
Pattaya Bhizinesi & Tourism Association Mutungamiri Boonanan Pattanasin akati akaodzwa moyo vashoma vashandi vekushanyirwa vakawana majekiseni uye vakanyunyuta kuti hurumende haina kutsanangura kuti sei vashoma vashandi vebazi vakawana jabs.
Thanet Supornsahatrangsi weChonburi Tourism Industry Council akati May 20 kuti mapoka emabhizimisi ezvekushanyirwa akakumbira hurumende kuti iise pamberi vashandi vezvekushanya muzvirongwa zvekudzivirira vaPattaya. Asi ivo chete vakakwanisa kutanga kwekutanga zviuru makumi maviri nepfumbamwe China neChishanu vaive vashandi vekurapa, vanozvipira nevakwegura.
Pattaya kuva ne20,000 chete jabs zvakare zvine chekuita neThanet, sezvo guta pakutanga rakati raizove ne 42,000, ndokuzoidzokorora kusvika 30,000. Asi kutadza kwehurumende kuwana majekiseni panguva imwecheteyo nedzimwe nyika zhinji kwakasiya Thailand isina kugadzirira wave yazvino coronavirus wave. Inopfuura hafu majekiseni akaendeswa kuBangkok, uko kwakapfuura zviitiko chiuru zve Covid-19 vari kuziviswa rinenge zuva nezuva.